sary | Oleg Soloviev mpanakanto
Я художник с большим опытом, человек, который ежедневно посвящает часы совершенствованию своих навыков. Fantatro teknika samy hafa sy ny mpitan-teknika, miasa amin'ny sary sy ny takela-kazo "nentim-paharazana" fitaovana - lamba, taratasy, sns. Matokia, fa ny asa hifanena ny zavatra ilaina rehetra sy ny zavatra takiana, jereo aesthetically mahafinaritra. Hifandray na sary no hamaha azy rehetra nasaina asa: Raha Logo, avy eo dia miasa amin'ny fanentanana ny raharaham-barotra sy raharaham-barotra hafa hamaha olana, raha hanafatra ny sary ho toy ny fanomezana - dia azo antoka fa hampifaly sy tsy nampoizina koa, iza no prepodneson. Ny asa tsara nijery an-anatiny, ary ny mpianatra dia mankasitraka foana ny sary, raha manaraka ny fepetra takiana, nampanompoany azy ireo mpampianatra.
Avo kalitao sy ny fahombiazan'ny ny fanatanterahana ny asa na be pitsiny, manao originality, famoronana asa manokana araka ny fanirianao - izany no mampiavaka ny asa avy amin'ny tolo-kevitra hafa mpanakanto sy ny endrika.
Vonona aho mba hampihatra izay mba! niresaka, aza adino ny:
• Raha toa ka mila tsy solosaina sary, dia Select fitaovana, izay te-hahita ny asa (baoritra, lamba, Kraft; sary fanamarihana toerana, in pensilihazo, gel penina, ranomainty, etc.);
• ny fepetra takiana ho an'ny rehetra ny sary, ohatra, niriany fomba, mifantoka amin'ny antsipiriany, sns.
Ny asa - izany foana ny maha-matihanina ny quintessence, ny symbiosis amin'ny famoronana, noho izany sary sy ny sary - fa tsy ny ravaka anatiny, fa koa fitaovana ho tombony, raha mampiasa azy ireo ho ara-barotra tanjona!